LEGO ကောလဟာလတွေပါ Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား?
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1388 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego Marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်
တစ် ဦး ထင်ဘို့ကောလာဟလများနှင့်အတူ Lego Marvel အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါ်ထွက်လာသော Collectable Minifigures Series သည်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။
စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ခြင်းမပြုမီ၊ အက္ခရာများတွင်တရားဝင်အတည်ပြုချက်မရှိကြောင်းသတိရပါ ကောလာဟလာ ဒါမှမဟုတ်က Marvel စုဆောင်း Minifigures ၏စီးရီးလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အတည်မပြုမှီတိုင်အောင် Lego အုပ်စုတစ်စု, ဆားတစ်ဆန်နှင့်အတူအောက်ပါယူပါ။
လေးပါးထဲက Disney+ Marvel ဖြစ်ကောင်းလာမည့်စီးရီးတွင်ဖုံးလွှမ်းပြပွဲ, နှစ်ခုသာလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပါပြီ။ ဤအရာ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောလာဟလများပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များအတွက်အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြနိုင်ပြီးရုပ်ပြသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါစာရင်းတွင် WandaVision၊ Falcon နှင့် The Winter Soldier တို့အတွက်ဖြစ်နိုင်လျှင်အမှန်တကယ်ဖျက်ဆီးမည့်သူများပါ ၀ င်သည်။ နှင့် Loki ။
အသေးစားဓာတ်ပုံများစာရင်းတွင်လူကြိုက်များသော streaming စီးရီးဖြစ်သော WandaVision မှ ၃ ခုပါဝင်သည်။ သင်ပြသပြီးပြီဆိုလျှင်၊ Wanda Maximoff သည် Scarlet Witch ၏အခန်းကဏ္ to သို့တက်လှမ်းခြင်းသည်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။art အပြီးသတ်အတွက်နှင့်အလားအလာ minifigure ကောင်းကောင်း fit လိမ့်မယ်။ Wanda ၏ပလပ်စတစ်ကြားဖြတ်ပြောဆိုခြင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကို sitcom-based အဖြစ်မှန်တွင်မကျရောက်စေနိုင်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
p ဖြစ်နိုင်သည်အခြားဇာတ်ကောင်နှစ် ဦးart ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ Monica Rambeau ပါ ၀ င်ပါတယ်။ သူရဲ့စွမ်းအားတွေကသူမရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ကိုသူမမြင်ရတာကိုမြင်ပြီးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ White Vision ဖြစ်နိုင်သည်။ Android ကိုပရိသတ်များကတီထွင်ခဲ့ပြီး Vision ကဲ့သို့တူညီသောလှုပ်ရှားမှုရှိသော်လည်းသူသည် Paul Bettany ၏စိတ်ဓာတ်ကိုဖန်တီးပေးသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများမရှိခဲ့ပါ။
အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့် The Winter Soldier
နောက်ဆုံးပေါ်ကဇာတ်ကောင်နှစ်လုံးပဲ Disney+ ပြပွဲပါမယ် p ဖြစ်လိမ့်မည်art ကောလဟာလသတင်းများအရ Collectable Minifigures စီးရီးနှင့်ပြသသူမှတစ်လုံးတည်းသာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမက Baron Zemo နှင့် Okoye မဟုတ်ဘဲသူတို့နှစ် ဦး စလုံးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်မတ်မတ်အသွင်အပြင်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနှစ်ခုလုံးသောအရာအစားဆမ် Wilson ကနှင့် Bucky Barnes အစားဟောင်းယခင်လတ်တလောဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်သွားကြဖို့ဘာမှမပါလျှင်ပိုမိုအဆင့်မြှင့်ကြည့်ကြည့်ခံရဖို့အကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Sam Wilson အားတောင်လေယာဉ်ပျံနှင့် Redwing မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များပါ ၀ င်သည့်တောင်ပံစူပါဟီးရိုးဟု Falcon ဟုလည်းလူသိများသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Bucky Barnes သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာတိုးမြှင့်သောစစ်သားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးအမ်မရိနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကသူ့ကိုသတ္တုလက်မောင်းလက်ခံခဲ့သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင် Vibranium ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၏နောက်တစ်နေ့အဖြစ် Disney+ လွှတ်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်, Loki သည်သမိုင်းကိုပြန်လည်ရေးသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်လည်းကောင်း၊ Time Variance Authority ကိုတင်းကြပ်စွာဆန့်ကျင်သောအခြားသူများ - ၎င်းအတွက်အချိန်ဇယား၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သူ၏ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာထူးခြားချက်များကိုအဓိကအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ။ ဇာတ်ကောင်သုံးယောက်သည်ဤပြပွဲကိုဖော်ပြရန်ကောလဟာလများရှိသော်လည်းသေးငယ်သောပုံစံနှစ်ခုသာရှိသည်။
ပြပွဲသည်ထုတ်လွှင့်ရန်အချိန်မရသေးပါကစာရင်းပြုထားသောအသေးစားဓာတ်ပုံများသည်စီးရီးများပေါ်တွင်အခြေပြုမည်ဖြစ်သော်လည်းသေချာပေါက်သိရန်လမ်းမရှိဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ Loki သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ကားများ၏ရန်ငြိုးများနှင့်ကူညီခဲ့သူ Thor ၏ညီဖြစ်သူကိုမကောင်းသောအကြံအစည်များ၏ဘုရားသခင်အဖြစ်ရှင်းပြရန်လွယ်ကူသည်။
အခြားဇာတ်ကောင်များ၏ရုပ်ပြသွင်ပြင်များအတိုင်းသွားသောအခါ Throg သည်အခြားစကြာ ၀ universeာ၏ Thor တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်ထင်သည်မှာ Frog ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်း Lady Loki သည်အလားတူဆင်တူသောဘုရားမျိုးကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…?
ငါတို့မှာနောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးနဲ့သီးခြားစီပထမဆုံးကြည့်တာပါ Marvelလက်တွေ့ကျ - စူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ယခုအချိန်တွင်ပြသသည်၊ ကောလာဟလတွင်ပါ ၀ င်သည့်စွပ်စွဲချက်အချို့ကိုပြသခဲ့သည်။ Peggy ကို Cartသူမသည် Super soldier serum အတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး Vibranium ဒိုင်းလွှားကိုဆောင်ယူခဲ့သူအဖြစ်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Captain ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အခန်းကဏ္onကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
Star-Lord T'Challa သည်နောက်ထပ်ပြသခြင်း၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ Yondu သည် T'Challa ကိုအမေရိကရှိ Peter Quill အစား Wakanda မှယူခဲ့လျှင်အနာဂတ်ဘုရင်သည် Black Panther ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
Zombie Captain America သည်စကြ ၀ fromာမှဆင်းသက်လာသည် Marvel သူရဲကောင်းများသည်ခွေးရူးပြန်ရောဂါရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီး၎င်းအားစူပါပါဝါ၊ မသေသပ်သောကပ်ပါးကောင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တရားဝင်ပြသခဲ့သည့်ကောလာဟလများအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးမသိရသောဖြစ်ရပ်နှစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည်။
Steve Rogers ကို minifigure တစ်ခုဖြင့်ပုံဖော်မည် Spider-Man ပုံမှန်အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အပြာအရောင်တစ်မျိုး၊
အခြားတစ်ခုမှာ Warlord Gamora မှဖြစ်ပြီးသူသည်မွေးစားဖခင်၏အဖျက်စွမ်းအားများကိုလက်ခံပြီးမရေမတွက်နိုင်သောကမ္ဘာကြီးကိုဖြုန်းတီးစေသောနတ်မင်းကြီး၏ပုံစံကိုသရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်အရာကိုမှအတည်မပြုရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ဖတ်ထားသောအရာအားလုံးကိုသင့်လျော်သောသတိဖြင့်ယူပါ။
← မော်နီကာ၏ apartment လာမည့် Lego ဖြစ်လိမ့်မယ် Friends တီဗီရှိုး
Lego Marvel 76187 Venom ပြန်လည်သုံးသပ် →